Wararka Maanta: Sabti, Aug 4 , 2012-Guddiga Farsamada ee soo xulista Xildhibaannada Baarlamaanka oo dalbaday in ugu dambeyn berri lasoo gudbiyo magacyada Xidlhibaannada
Shir jaraa'id oo guddoomiyaha guddigan Prof. Cabdullaahi Xiirey uu Muqdisho ku qabtay ayuu ku sheegay in waqtiga oo yar awgiis ay odayaasha weydiisanayaan in soo xulista xildhibaannada ay soo gabagabeeyaan berrina soo gudbiyaan.
"Odayaasha dhaqanka waxaan ka doonaynaa in ugu dambeyn berri oo Axad ah ay noo soo gudbiyaan xildhibaannada baarlamaanka cusub, waayo waxaan doonaynaa in dalkan loo sameeyo baarlamaan tayo leh," ayuu yiri Prof. C/llaahi Xiireey.
Sidoo kale, guddomiyaha guddiga farsamo wuxuu xusay in odayaasha laga doonayo inay soo gudbiyaan dad ay kasoo fikireen - wax akhrin kara waxna qori kara, kana saari kara dalkan dhibaatada uu ku jiro.
"Odayaasha waxaan ka codsanaynaa inay dhowraan shuruucda ka mid noqoshada baarlamaanka cusub, kuwaasoo ay ka mid yihiin: inuu Soomaali yahay, inuusan wax dambi horay u gelin, in maskaxdiisu dhan tahay, inuu dugsi sare kasoo baxay iyo inuu ixtiraamo diinta Islaamka. Waana inay odayaashu ilaaliyaan saamiga haweenku ay ku leeyihiin baarlamaanka ee 30%," ayuu Prof. Xiiriye ku yiri shirkiisa jaraa'id.
Sidoo kale la guddoomiyaha guddiga farsamo, Xaliimo Ismaaciil (Xaliimo Yarey) iyadoo sheegtay inaan la ogolaan doonin in odayaashu ay soo gudbiyaan xubno aan u qalmin inay xildhibaanno noqdaan, iyadoo xustay in haddii xubnahaas loo soo gudbiyo ay ka qaadan doonaan tallaabada u dagsan.
Ugu dambeyn, Xaliimo Yarey waxay sheegtay inay 09:00 aroornimo illaa 05:00 galabnimo ee berri ay ku sugnaan doonaan xafiiskooda ayna odayaasha kala wareegi doonaan magacyada xildhibaannada baarlamaanka oo tiradoodu tahay 275 xubnood.
8/4/2012 2:15 PM EST